Haisi Fox News dambudziko nderokufambiswa kwevhidhiyo yeFox News - TELES RELAY
HOME » kambani Izvo hazvizi Fox News dambudziko nderokufambiswa kwevhidhiyo ye Fox News
Haisi Fox News dambudziko nderokufambiswa kwevhidhiyo yeFox News
Imwe nyanzvi yeAmerica inoratidzika kufungidzirwa neFox News uye avo vayo iye zvino, mhuri yeMurdoch. Munguva pfupi, i New York Times saka zvinoreva kutsanangura "Iyo umambo hune simba hweRupert Murdoch hwakaita sei nyika". Ichi chinyorwa chichitevera kuongorora kwe New Yorker Sur "Kuitwa kwe" Fox News White House "". Nyaya mbiri idzi dzinoti dzinoda kuzarura chokwadi chezvematongerwe enyika ye Fox News uye Patriarch Rupert Murdoch pane zvematongerwo enyika eAmerica.
Roger Ailes, muvambi weFox NewsZvimwe angave achikoshesa nyaya idzi mbiri, iye akaita zvinhu zvose kuti azvizivikanwe naFox News, akasimbiswa zuva rimwe nerimwe kubva pakufa kwake (May 2017), neinoti "kuremekedzwa" mhizha. Akataura kuti Fox News nguva dzose aizoramba ari pasi pedo yakarongedzwa nevashambadziri varo. Pasinei nokudzingwa kwaRoger Ailes, anopomerwa mhosva yokurwisana nepabondeFox News yemazuva ano chirongwa ichiri kunyanya kuratidza maonero ayo. Sezvakaita wizard yeOz, akasimbisa chimiro chechiremera chake uye icho chendaneti yake. Kusarudzwa kwaDonald Trump kunowanzosimbisa.
Asi, kana munhu akatarisisa mubvunzo uyu, pfungwa yokuti Fox News naRupert Murdoch vangave vakaumba nguva yemazuva ano zvinoita sezviri pachena kudarika pakutanga. Kungofanana neukama husati hwavapo pakati peTV uye Trump.
Fungidzira kuti kukunda kwaTrump mu2016 kunogona kuve kunonzi kuFox News. Kutaura kwakadai kwaizova kwakatendeseka kudai Rupert Murdoch naRoger Ailes vakange vakurudzira Donald Trump kuti vave mubatanidzwa weRepublican for 2016. Asi ivo havana kuzviita. ari New York Times bv Le New Yorker anofanira kuzviziva. Hatifaniri here kufunga kuti Ailes na Murdoch vakakoniwa kudzivirira vaRepublicans kuti vasavhota?
Asi kukundikana uku kukunda chisarudzo cheRepublicans mu2016 hachisi chaicho chinoshamisa. Ngatishandisei zvinyorwa zvakananga.
Sarah Palin, aichimbova gavhuna weAlaska uye akashungurudza mutungamiri wepurezidhendi weFox News, 17 June 2013.
Maererano nevakawanda nyanzvi"Fox News inokosha mumatongerwe enyika eAmerica ... [iyo] inonyatsoratidza maonero evanhu veAmerica." Mukuita kudaro, vanoderedza matambudziko akawanda eFox News. Chimwe chazvo chinonyanya kukosha: pasinei nekubhadhara kwemamiriyoni maviri emadhora pagore kuna Sarah Palin semupepeti (2010-2013) uye nguva yakawanda yekutengesa ndege, Fox News akakundikana kumuita mufananidzo wakaremekedzwa republic republican.
Iyo "inofungidzira" bubble Fox News
Vanyori venhau nevanodzidza vanoderedza chokwadi cheFox News's weak audience. Muchi2018, Fox News inokwezva pavhareji pamusoro 2,4 mamiriyoni vanoona munguva yekutanga. Icho chimiro chinonzi priori chinoshamisa. Chaizvoizvo, Fox News ndiyo inonyanya kutaridzirwa chiteshi mu2018. Inofanira kuyeukwa, zvisinei, kuti vanhu veAmerica mu2018 vaiva vanenge 327 mamiriyoni vanogara - mune mamwe mazwi, 99,3% veAmerica havana kutarisa Fox News.
Vanhu vangani vakatarisa ichi chiteshi? Pamusoro peBBCS Evening News, purogiramu yemashoko iyo inozadzisa vateereri vakaderera vematambo ekubuditsa marenda, pamusana, zvinopfuura kaviri nhamba yeFox News viewers in 2018.
Ne nhamba dzakadaro, Fox News inonyanya kutsvaga kutsvaga vataridzi kune imwe nzira yakapoteredza. Mune mamwe mazwi, zvinogona kutaurwa kuti Fox News inotarirwa kunyanya pamusangano wekare wekare uripo wevateereri vayo, vanobvuma zviduku asi vakavimbika, kuti haisi kuchinja pfungwa dzevanhu.
Nhoroondo yevanhau-presidential nyaradzo
Imwe pfungwa yakasimudzwa nevamwe, simba rechokwadi ra Fox News raizove rakabatana nehukama hwepedyo neTrump administration. Kunyanya, kusarudzwa kwaimbova gurukota reFox News Bill Shine kumusangano weVictoria House yekukurukurirana - panguva yaaiva nguva dzose inobhadharwa neFox News - simbisa kubatana pakati pe White House ne cable cable.
Zvisinei, iyo audiovisual media uye White House vave nehukama hwepedyo kwenguva yakareba.
Sezvo munyori wenhau dzakaitika David Culbert akazvizivisaMutungamiri Roosevelt akanga akumbira muongorori weBoake Carter, anotsoropodza zvakashata nezvechinangwa chake, kuti aparadze kubva kuCBC. Kuti aite izvi, akanga achingova akakumbira mukuru wepepanhau kuti ave nechokwadi chekubvisa kuratidzwa.
Asi munyaya iyi, zvinonyanya kukosha kuti hapana hurumende ichazombopedza Mutungamiri Lyndon Johnson (1963-1969). Kuwedzera kwake mune zvematongerwo enyika kwaive inotsigirwa neKTBCredhiyo yake yakabva kuAustin, Texas. Zvino akasarudzwa kuCongress, Johnson akanyoresa chiremba chemasimiti panzvimbo yemudzimai wake, achiita kuomerwa kuCSS kuti iwane chikamu chekubatanidza mari yakawanda.
Frank Stanton, mutungamiri weBBCS uyo aive neukama hwepedyo uye hupenyu hwose, akaisa chisimbiso ichocho. Stanton akazove mutungamiriri weBBC, uye apo Johnson akabudirira Kennedy paVhite White, varume vaviri vakaungana nguva dzose. Mune yakanyora hurukuro musi waFebruary 6 1964Nyaya dzeStanton President President Johnson pamusangano unouya nemusangano wehurukuro we New York Times.
Sezvo zvinyorwa izvi zvinoratidza, kukurukurirana kwavo kwakanga kusingogumiri kune utapi wenhau:
"Iwe unofungei pamusoro pe  ivo vanobvumirwa neRubvanianiti vanoitei? Vanofambira mberi here? (Johnson)
"Handifungi kuti vari kufambira mberi zvachose. (Mutungamiri weCSC)
Frank Stanton, mutungamiri weCSB, ave mushamwari kwenguva refu weMutungamiri Lyndon Johnson.
Zvichida izvi Kukurukurirana kwakafanana ikozvino kuitika nguva dzose pakati peMutungamiri Trump uye nhamba dzinoverengeka dzeFox News.
Saka hatigoni kutumidza nyaya yeTump "isina kumboitika." Uye kusiyana nekambani yebhizimisi pakati peJohnson neBBC, haina kuonekwa kuti Donald Trump ane ruzivo rwezvemari kune Fox News.
Kure ne "Planet Fox"
Izvi zvinotevera hazviregi kukakavara kwezviri pachena kwekufarira pakati pe Fox News ne White House. Asi vatapi venhau nevadzidzisi vanozviti vanoratidza ruzivo rwakanyanya rwaRupert Murdoch naRoger Ailes mune zvematongerwe enyika muUnited States vanogona kuchengeta simba iri pasina ruzivo rwavo.
Ichokwadi ndechokuti vazhinji vedu hatiti kurarama pa "Planet Fox". Uye hatisi vatongi veMurdoch Empire. Vatsoropodzi ve New Yorker bv Du New York Times chete rubatsiro rweFox News rukawana kuvimbika nehuwandu hwayo. Izvozvo zvinopupurira, a contrario, kuti simba ra Fox News rinoramba richivhundutsa vavengi varo.
Roger Ailes haana kumbobvira achitya vanotsoropodza vevanoti "vanoremekedzwa" mhizha. Kufanana newe wizard weOz, akatya zvakawanda kupfuura aigona kuona simba rake uye ye "chisikwa" chake. Asi izvi ndizvo izvo zvakaitika munguva pfupi yapfuura.
Nokudaro, Fox News yakange isingagoni kudzivirira sarudzo kana kusarudzwa zvakare kwaBarack Obama kana kuti ruvara rwebhuruu rwe2018. Uye pasinei nekurumbidzwa uye kunogara nekurumbidzwa kwehutungamiri huripo, hutungamiri hweHurumende Trump huripo "Inoshamisa".
Hapana mubvunzo kuti Fox News ine a kuchinja - inovimbiswa - pamasangano ezvematongerwe enyika: chiito chake hachina chokwadi chinokurudzira Republican kuvhota ... yeRipublicans. Asi, chaizvoizvo, simba rayo rokunyengetedza rinogona kuve se "marginal".
Kutsanangura simba re Fox News zvakanyatsoratidza uye kusimbisa simba rayo rekusarudza sarudzo zvicharatidza kuti zvinowedzera kukuvadza zvechirongwa ichi kudarika kukurudzira zvinyorwa zvakapoteredza iyi chiteshi nemapepanhau ekutsvaga.
Shanduro yekutanga yenyaya ino yakashandurwa kubva Meta Media uye Thomas Hofnung weThe Conversation France.
Nyaya iyi yakatanga kutanga http://theconversation.com/ce-nest-pas-fox-news-le-probleme-cest-lobsession-des-medias-pour-fox-news-116242
Sweden yakakurudzira kuhaya mapurisa eNorway
Sasi: kupemberera kubatana kwenyika kunotora mavara ehurumende yekubatana
Iyo madzimambo anotonga inomanikidza Lady Gabriella kuti achinje nguvo yake yemuchato - "Kuremekedza tsika!"
VANHU & VANHU3,731